Cidda aan nahay - ULLER
Uller® waa sumad ay abuurtay iyo kuwa jecel FREERIDE. Waxsoosaarka farsamada ee waxqabadka sare leh ee loogu talagalay kuwa khibrada badan leh ee u baahan badeecad sida ugu fiican ugu shaqeysa xaalad kasta ama shuruudaha dhulka.
Waxaan magaceena ka soo qaadaneynaa Isbaanishka, mid ka mid ah dhulalka heer sare leh dhaqanka jiilaalka ugu weyn, qaasatan Norwey maadaama Uller uu yahay Ilaaha Jiilaalka halkaas.
Nooca koowaad ee jiilaalka Isbaanishka
Uller® waa sumaddii ugu horreysay ee 100% Isbaanishka ee qalabka qaboobaha. Waxaan nahay koox saaxiibo ah oo jecel xamaasada freeride, kuwaas oo go'aansaday in aan sameysano maaskaro u gaar ah si aan u helno waxa ugu haboon qaabkeena barafka.
Qaarkeen baa iska booday tan iyo markii aan kaliya 3 sano jir nahay isla markaana jecel-off-piste jecel isla da'daas markii ay barafku lahaa baraf barafkiisu ka yara ballaadhan yahay qadaadiic lacagta isla markaana aad indhahaaga hoos ugu degtay. Waqtigaas waxaan isticmaalnay muraayadaha indhaha barafka oo ka badan intaan iska siino oo aan ku caawinno, way isku buuqeen waxayna araga ka dhigeen mid adag, haddaba Uller®-keena waa wax aan ka badneyn xusuusta wanaagsan.
Waxaa loo abuuray si loo daboolo baahiyaha ugu baahida badan ee qaabka FREERIDE oo leh waxyaabo tayo sare leh oo tayo sare leh oo hubiya waxqabadka sare ee xaaladaha ugu xun. Waxaan ku tijaabineynaa dhamaan badeecadeena culeyska ugu badan si aan u hubino inay uga jawaabaan sida aan fileyno.